ပင်မစာမျက်နှာ > Palmitoylethanolamide (PEA)
သင်ကအရည်အသွေးမြင့်မားသောအရာကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက Palmitoylethanolamide (PEA) ရောင်းဖို့အမှုန့်, ​​ထို့နောက်သင်လက်ျာဘက်၌ရောက်နေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်နိုင်ငံ၏အကျော်ကြားဆုံး၊ အသိပညာနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသော Palmitoylethanolamide (PEA) ထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သန့်ရှင်းမှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ Third-party ဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုမှအမြဲတမ်းစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သောသန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာထုပ်ပိုးထားသောထုတ်ကုန်များကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမေရိကန်၊ ဥရောပ၊ အာရှနှင့်ကမ္ဘာ့အခြားဒေသများသို့အမှာစာများအမြဲတစေပေးပို့သည်။ ဒီတော့သင် Palmitoylethanolamide ကို ၀ ယ်ချင်တယ်ဆိုရင် (PEA) ဖြစ်နိုင်သမျှအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးရှိသောအမှုန့်များ၊ cofttek.com ၌သာဆက်သွယ်ပါ။
သင်စတိုးဆိုင်များတွင် phenylethylamine ကိုဝယ်လို့ရပါသလား။
ချောကလက်တွင် phenylethylamine ပါဝင်ပါသလား
နာကျင်မှုအတွက် PEA သည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
Hordenine ကမင်းရဲ့ system ထဲမှာဘယ်လောက်ကြာကြာနေမှာလဲ။
Palmitoylethanolamide (PEA) ဘေးကင်းလုံခြုံပါသလား။
ငါ Palmitoylethanolamide ဘယ်မှာရနိုင်မလဲ။
Palmitoylethanolamide (PEA) ဆိုတာဘာလဲ။
ငါတို့ဘာကြောင့် Palmitoylethanolamide (PEA) လိုအပ်တယ်။
fibromyalgia များအတွက် PEA ကဘာလဲ?
သောက်သုံးရေ neuropathy နှင့်အတူကူညီပါသလား
ပဲပုပ် hypovolemia နှင့်အတူလူနာအတွက်ဘုံဖြစ်ပါသလား
Palmitoylethanolamide (PEA) သည် endocannabinoid မိသားစုမှဖြစ်ပြီးအက်ဆစ်အက်စစ် amides အုပ်စုဖြစ်သည်။ PEA သည် analgesic နှင့် anti-inflammatory လုပ်ဆောင်မှုရှိကြောင်းသက်သေပြခဲ့ပြီး၊ အမျိုးမျိုးသောနောက်ခံလက်တွေ့အခြေအနေများနှင့်အတူအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူနာများအကြားနာတာရှည်နာကျင်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုထိန်းချုပ်သည့်လေ့လာမှုများတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။
National Institutes of Health မှ လေးစားဖွယ် ဒေတာဘေ့စ်
၏ဆေးများအတွက်ယူ သောက်သုံးသောနှုန်း 500mg-1.5gနာရီအနည်းငယ်တိုင်း၊ PEA သည်သုံးစွဲသူအားပျော်ရွှင်မှု၊ စွမ်းအင်၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အလုံးစုံသုခခံစားမှုကိုခံစားစေသည်။ Esp သည် mao-b inhibitor၊ hordenine နှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ PEA သည်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်အလုံးစုံပျော်ရွှင်မှုအဆင့်သစ်ကိုရရှိသည်။
အဘယ်သူမျှမလူသိများပြproblemနာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိပါတယ်။ PEA ကိုအခြားမည်သည့်ပစ္စည်းနှင့်မဆိုယူနိုင်သည်။ နာကျင်မှုကိုသက်သာစေသောဂန္ထဝင် analgesics နှင့် anti-inflammatories များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ Palmitoylethanolamide ကိုအခြားပစ္စည်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘဲအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Phenethylamine (PEA) သည်အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သဘာဝ monoamine alkaloid နှင့်လူတို့တွင်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်လှုံ့ဆော်သူအဖြစ်ဆောင်ရွက်သောအာမင်ကိုခြေရာကောက်သည်။
ပါးစပ်ဖြင့်သောက်သောအခါ - palmitoylethanolamide သောက်ခြင်းသည်လူကြီးများအတွက် ၃ လအထိအသုံးပြုသောအခါဘေးကင်းနိုင်သည်။ စိတ်ပျက်ဖွယ်အစာအိမ်ကဲ့သို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာအလွန်ရှားပါးသည်။ palmitoylethanolamide သည်သုံးလကြာအောင်အသုံးပြုရန်လုံခြုံမှုရှိမရှိသိရန်လုံလောက်သောယုံကြည်စိတ်ချရသောအချက်အလက်မရှိပါ။
Melatonin ကို Food and Drug Administration (FDA) မှတင်းကြပ်စွာမထိန်းချုပ်ထားကြောင်းသတိပြုပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မယ်လတိုနင်ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးလို့မသတ်မှတ်လို့ပဲ။ ထို့ကြောင့်၎င်းကို FDA မှအနီးကပ်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းမရှိသောဗီတာမင်များနှင့်ဓာတ်သတ္တုများကဲ့သို့သောအစားအသောက်ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းအဖြစ်ရောင်းချနိုင်သည်။
PEA သည်ခန္ဓာကိုယ်မှထုတ်လုပ်သောသဘာဝပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နာကျင်မှုနှင့်ရောင်ခြင်းအတွက်ဖြည့်စွက်အနေဖြင့်အသုံးပြုရန်အလွန်အန္တရာယ်ကင်းသည်။
ပဲစေ့များသည်အပင်ပေါက်ရန်အတွက် ၇ ရက်မှ ၃၀ ရက်ကြာသည်။ အကယ်၍ မြေဆီလွှာအပူချိန် ၆၅ မှ ၇၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိပါကပဲစေ့များသည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာပေါက်လေ့ရှိသည်။ သင်စိုက်ပျိုးခြင်းမပြုမီ ၂၄ မှ ၄၈ နာရီကြာအောင်စိမ်ခြင်းဖြင့်အပင်ပေါက်ရန်အတွက်အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ပဲစေ့တွေဟာဘယ်လောက်အထိကြီးထွားလာမယ်၊
ဤဖြည့်စွက်ဆေးများကိုစားသုံးသောအခါ ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုအဆင့်ကိုမြင့်တက်စေပြီးစိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းစေသည်။ ၎င်းကိုကောင်တာမှရနိုင်သည်၊ ၎င်းကိုဝယ်ယူရန်ဆေးညွှန်းမလိုအပ်ပါ။ Phenylethylamine ကိုအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်လည်းအသုံးပြုသည်။
ကျနော်တို့ရာပေါင်းများစွာ neuropathic နာကျင်မှုလူနာကုသပြီးနောက်ဒီကုသမှုအချိန်ဇယားတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်တွေ့အတွေ့အကြုံအပေါ် အခြေခံ၍ PEA ၏နာမ်စားပုံစံဖြင့်အနည်းဆုံး ၁၀ ရက်ကြာစတင်ခြင်းသည် PEA ၏လုံလောက်သောကုထုံးအဆင့်ကိုလျင်မြန်စွာရောက်ရှိရန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆသည်။
ကိုယ်ခန္ဓာတွင်သဘာဝအလျောက်တွေ့ရသောအဆီတစ်မျိုးသည်အိပ်ရေး ၀ င်မှု၏သော့ချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ သုတေသီများသည် PEA (palmitoylethanolamide) ဟုခေါ်သောမော်လီကျူးသည်အိပ်စက်ခြင်းကိုအထောက်အကူပြုရုံသာမကနာကျင်မှုကိုလည်းတိုက်ဖျက်နိုင်ပြီးရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျှော့ချနိုင်သည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည်။
သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကအကြံပြုထားသည့်အတိုင်းနာကျင်မှုသက်သာစေရန်အခြားနာကျင်မှုဆေးဝါးများနှင့်ဖြစ်စေသောက်နိုင်သည်။ PEA သည်မလိုလားအပ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေသည့်ပိုမိုပြင်းထန်သောနာကျင်မှုဆေးများအပေါ်မှီခိုမှုကိုလျှော့ချရန်လည်းကူညီနိုင်သည်။ အများဆုံးအကျိုးခံစားခွင့်သည် ၃ လအထိကြာနိုင်သော်လည်းပုံမှန်အားဖြင့် ၄-၆ ပတ်အတွင်းရလဒ်များကိုတွေ့နိုင်သည်။
ဖင်နိုင်းသိုင်းအမ်မင်၏မည်သည့်အစားအစာတွင်မဆိုချောကလက်သည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လူတစ် ဦး အားချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိလျှင် ဦး နှောက်တွင်ထုတ်လုပ်သည့်ဓာတုပစ္စည်းဖြစ်သည်။ သို့သျောလညျး "ချောကလက် amphetamine" ၏အခန်းကဏ္disputကိုအငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အများစုမှာလျှင်မအားလုံးချောကလက် - ဆင်းသက်လာ phenylethylamine က CNS မရောက်မီ metabolized လုပ်ထားတယ်။
နို့တိုက်သတ္တဝါများတွင် phenethylamine ကိုအင်ဇိုင်းအက်စစ် L-phenylalanine မှအင်ဇိုင်းမွှေးများ L-amino အက်စစ် decarboxylation မှတစ်ဆင့်ထုတ်လုပ်သည်။ အထူးသဖြင့်ပိုးမွှားများအချဉ်ပေါက်ပြီးနောက်ဖင်နက်သလင်းကိုအခြားသက်ရှိများနှင့်ချောကလက်ကဲ့သို့သောအစားအစာများတွင်တွေ့ရှိရသည်။
သုတေသနပြုချက်အရ PEA သည်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် nociceptive anti-niciceptive ဂုဏ်သတ္တိများကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး၎င်းကိုပုံမှန်သောက်သုံးခြင်းသည်နာကျင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအာရုံကြောဆဲလ်များ၏တုန့်ပြန်မှုကိုအားပျော့စေခြင်းဖြင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏နာကျင်မှုအပေါ်သဘာဝတုံ့ပြန်မှုကိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်။
နာရီအနည်းငယ်တိုင်း ၅၀၀ မီလီဂရမ်မှ ၁.၅ ဂရမ်ဆေးများဖြင့်တိုင်းတာသည် PEA သည်သုံးစွဲသူအားပျော်ရွှင်မှု၊ စွမ်းအင်၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အလုံးစုံသုခခံစားမှုကိုပေးသည်။ Esp သည် mao-b inhibitor၊ hordenine နှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ PEA သည်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်အလုံးစုံပျော်ရွှင်မှုအဆင့်သစ်ကိုရရှိသည်။
မုယောစပါးတွင်အပင်ပေါက်ရန်အတွက် ၅ မှ ၁၁ ရက်အတွင်း hordenine ပမာဏသည်အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်ပြီးတစ်လအကြာတွင်သဲလွန်စများကျန်ရှိသည်အထိဖြည်းဖြည်းချင်းလျော့ကျသည်။ ထို့အပြင် hordenine သည်အဓိကအားဖြင့်အမြစ်တွင်တည်ရှိသည်။
Palmitoylethanolamide သည်ခန္ဓာကိုယ်၏ကောင်းမွန်စွာသည်းခံနိုင်သော်လည်းလူများသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုသတိပြုမိပါကတစ်နေ့လျှင် ၄၀၀ မီလီဂရမ်ထိသောက်သုံးရန်လိုအပ်သည်။
ပိုအရေးကြီးတာကဒီဒြပ်ပေါင်းကိုသုံးလကျော်မသောက်သင့်ဘူး။ PEA ကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုခြင်းသည်အစာအိမ်ဆိုင်ရာပြissuesနာများဖြစ်စေနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုသတိမပြုမိပါ။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ PEA ကိုအရေပြားတွင်မသုံးသင့်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့်နို့တိုက်နေသည့်မိခင်များအနေဖြင့်ဆေးများသည်ဤအုပ်စုများအတွက်အန္တရာယ်ကင်းသည်ဟုဆိုနိုင်သည့်သုတေသနနှင့်သက်သေအထောက်အထားအလုံအလောက်မရှိခြင်းကြောင့်၎င်းကိုမသုံးစွဲသင့်ပါ။ အလားတူစွာသင်သည်မည်သည့်အခြေအနေမျိုးမဆိုခံစားနေရပါက Palmitoylethanolamide ကဲ့သို့သောဖြည့်စွက်ဆေးမသောက်မီဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အဖြေဖြစ်ပါသည် Cofttek။ Cofttek သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်စတင်ပေါ်ပေါက်လာသောဖြည့်စွက်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ၀ ယ်ယူသူများအားဖြန့်ဖြူးသောကုန်ကြမ်းများအရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်အတွက်နာရီနှင့်အမျှအလုပ်လုပ်သော R&D အဖွဲ့ကိုအလွန်ဂုဏ်ယူသည်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာကုမ္ပဏီသည်ဇီဝနည်းပညာနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများတွင်အကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်။ ကုမ္ပဏီမှရောင်းချသောထုတ်ကုန်များအားလုံးကိုသူတို့၏အကြီးစားအဆင့်မြင့်ဇီဝဓါတုဗေဒစက်ရုံတွင်ရင့်ကျက်သောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသည့်စနစ်နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာဆိုင်ရာစက်ရုံများတွင်ဖန်တီးထားသည်။ Cofttek သည်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းဈေးကွက်တွင်နာမည်ကောင်းရစေသောအရည်အသွေးမြင့်ကုန်ကြမ်းများထုတ်လုပ်ရန်ကုမ္ပဏီမှကတိပြုသည်။ ဒီနေ့ကမ္ဘာတစ်လွှားမှာဖောက်သည်တွေရှိတယ်။
PEA ခရင်မ်သည်သဘာဝနှင့်အကာအကွယ်ပေးသည့်ပစ္စည်း palmitoylethanolamide (PEA) ၏အကောင်းဆုံးအာရုံစူးစိုက်မှုပါရှိသည်။ ထို့ကြောင့် PEA မုန့်သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိတောင့်တင်းခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ကောင်းမွန်သောဖြည့်စွက်ဆေးတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Palmitoylethanolamide (PEA) သည်အများအားဖြင့်တစ်ရှူးများပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်တစ်ရှူးများသို့မဟုတ်ကြွက်သားများဒဏ်ရာများကိုတုန့်ပြန်ခြင်းအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲ၌အနည်းငယ်သာထုတ်လုပ်သည်။ နာတာရှည်ခြင်း (သို့) ရောင်ရမ်းခြင်းများကိုတုန့်ပြန်သည့်အနေဖြင့် PEA ကိုခန္ဓာကိုယ်၏ကိုယ်ခံအားစနစ်မှထုတ်လုပ်သည်။ PEA ဟုလည်းလူသိများသော Palmitoylethanolamide သည်သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေသော lipid ဖြစ်ပြီး fatty acid amides အုပ်စုအောက်တွင်ရှိသည်။ ၎င်းဒြပ်ပေါင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၏ကိုယ်ခံအားစနစ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်သော်လည်း၎င်းသည်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အပင်များတွင်လည်းတည်ရှိပြီးပြင်ပအရင်းအမြစ်များဖြစ်သောကြက်ဥအနှစ်၊ ပဲပုပ်လက်ဆီသင်၊ PEA သည်စွမ်းအင် analgesic ဂုဏ်သတ္တိများရှိပြီး၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအဓိကဇီဝကမ္မဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။
PEA ကိုများသောအားဖြင့်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်နာကျင်မှုကိုလျှော့ချခြင်းအတွက်ပြုလုပ်သည်။ ဒီတော့ PEA ဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ရောက်သည်နှင့် PEA သည်သတ်မှတ်ထားသောနေရာတစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး၎င်းသည်စည်းနှောင်မှုဖြစ်စဉ်မှအပဆဲလ်၏ရောင်ရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုပိတ်ထားသည်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ PEA ၏ analgesic အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ဒြပ်ပေါင်း၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကြောင့်နာကျင်မှုအချက်ပြထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အထူးပြုကိုယ်ခံစွမ်းအားဆဲလ်များ၏လုပ်ငန်းကိုဟန့်တားနိုင်ကြောင်းသုတေသနအချို့ကဖော်ပြသည်။ ယန္တရားအတိအကျမသက်ဆိုင်ဘဲ PEA သည်အာရုံကြောဆိုင်ရာနာကျင်မှုနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းမှသက်သာရာရစေကြောင်းသေချာသည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း၊ Palmitoylethanolamide (PEA) ၎င်း၏လူကြိုက်များမှုအတွက်ရုတ်တရက်မြင့်တက်မျက်မြင်ခဲ့သည်။ PEA ၏ကုထုံးဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကို ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကတည်းကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်သုတေသီများသည်ဤဒြပ်ပေါင်းကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လေ့လာခဲ့ကြသော်လည်းလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း PEA ကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာကြသည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဒြပ်ပေါင်းများတွင်ပါဝင်နိုင်သည့်အကာအကွယ်နှင့်ကုသမှုအခန်းကဏ္ to အပြင်အမျိုးမျိုးသောရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
သို့သော်လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည် PEA ကိုအလွန်သေးငယ်သောပမာဏနှင့်ထုတ်လုပ်သည်ထက်များသောအားဖြင့်၎င်းပမာဏသည်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်နာကျင်မှုကိုဖိနှိပ်ရန်မလုံလောက်ပါ။ ထို့ကြောင့်လူများအား PEA ဖြည့်စွက်ဆေးများသောက်ရန်အကြံပေးသည်။ နာကျင်မှုနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုသက်သာစေခြင်းသည် PEA ၏အကျိုးကျေးဇူးများအနက်မှတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
PEA ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများကိုသဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်စေသောအရာအဖြစ်သြစတြေးလျနှင့်အခြားနိုင်ငံများ၌ဆေးဝါးမဟုတ်ဘဲအစားအစာထုတ်ကုန်အဖြစ်ခွဲခြားထားသည်။ PEA သည်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ antinociceptive၊ antulvulsant နှင့် neuroprotective properties ရှိသည်တို့ကိုပြသပြီးနာတာရှည်နာကျင်မှုကိုကုသရာတွင်ပိုမိုအသုံးပြုလာသည်။
Neuropathic Pain Treatment ဆေးတိုက်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျဆေးဆေးများသည်ပထမကုသမှုပထမအဆင့်ဖြစ်သည်။ အာရုံကြောဆိုင်ရာနာကျင်မှုဝေဒနာအချို့လေ့လာချက်များအရ Aleve သို့မဟုတ် Motrin ကဲ့သို့သော Steroidal Non-inflammatory မူးယစ်ဆေးဝါးများ (NSAIDs) ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်နာကျင်မှုကိုသက်သာစေနိုင်သည်။ အချို့လူများသည်ပိုမိုအားကောင်းသည့်နာကျင်ကိုက်ခဲဆေးကိုလိုအပ်နိုင်သည်။
သင်၏ဒူးထောက်မြှားဖြင့်အိပ်ခြင်းသည်သင်၏နာကျင်မှုအမြစ်များအပေါ်သက်ရောက်စေသော lumbar discs များ၏ဖိအားကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်သင်၏နာကျင်မှုလက္ခဏာများကိုသက်သာစေနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့နောက်ကျောကိုဖိထားပြီးအိပ်ရာခင်းနှင့်ခြေထောက်ကိုခုတင်နှင့်ထိတွေ့စေ။ ဒူးကိုမျက်နှာကြက်ဆီသို့အနည်းငယ်တင်လိုက်ပါ။
အာရုံကြောနာကျင်မှုလျှော့ချဘို့မဟာဗျူဟာ။ ဆီးချိုရောဂါ၏ထိပ်ပေါ်မှာထားပါ။ သင့်တွင်ဆီးချိုရောဂါရှိပါကသကြားဓာတ်ကိုထိန်းချုပ်ထားပါ။ လမ်းလျှောက်ပါ လေ့ကျင့်ခန်းသည် endorphins ဟုခေါ်သောသဘာ ၀ နာကျင်မှုဝေဒနာရှင်များကိုထုတ်လွှတ်သည်။ သင်၏ခြေထောက်ကိုနမ်းပါ။ ခြေထောက်အာရုံကြောနာကျင်မှုကြောင့်ထိခိုက်လျှင်, ကောင်းသောခြေထောက်စောင့်ရှောက်မှုအာရုံစိုက်ဖို့အချိန်ပါပဲ။
ပူနွေးသောရေသည်အပန်းဖြေရုံသာမကသင်၏ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်လုံးလည်ပတ်မှုကိုတိုးပွားစေနိုင်သည်။ "ဒါဟာချက်ချင်းသက်သာစေနိုင်ပါတယ်" ဟု Vinik ကပြောပါတယ်။ သို့သော်ဆီးချိုရောဂါကြောင့်ဖြစ်သောအာရုံကြောရောဂါသည်အာရုံခံစားမှုအားနည်းသွားစေနိုင်သောကြောင့်သင်မ ၀ င်ခင်ရေသည်မပူလွန်းပါစေနှင့်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအသုံးပြုရန်မ။ Palmitoylethanolamide သည်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်နာတာရှည်နာကျင်မှုများကိုအာဟာရဖြည့်တင်းရန်ကူညီနိုင်သည်။ ၎င်းကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်သာယူသင့်သည်။
PEA သည်နာကျင်မှုအခြေအနေများနှင့်ဆက်နွယ်သောအမျိုးအစားများစွာ၏နာတာရှည်နာကျင်မှုအတွက်ထိရောက်မှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် endometriosis နှင့် interstitial cystitis၊
Palmitoylethanolamide သည်အဆီဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဓာတုပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုကြက်ဥအနှစ်နှင့်မြေပဲကဲ့သို့သောအစားအစာများနှင့်လူ့ခန္ဓာကိုယ်များတွင်သဘာဝတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းကိုဆေးအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
Epinephrine ကိုသွေးကြောထဲကျစေသောလျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှု (PEA) ဖမ်းဆီးစဉ် ၃-၅ မိနစ်တိုင်း ၁-၅ မီလီဂရမ်ထိုးပေးရသည်။ epinephrine ပိုမိုမြင့်မားသောဆေးများကိုလေ့လာခဲ့ပြီးလူနာအများစုတွင်ရှင်သန်မှုနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာရလဒ်များတိုးတက်မှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
PEA etiologies ၏ရောင်စဉ်များတွင် Pseudo-PEA သည်မကြာခဏ hypovolemia, tachydysrhythmias, နှလုံးကျုံ့ခြင်း, သို့မဟုတ်အဆုတ် embolism, tamponade နှင့်တင်းမာမှု pneumothorax အဖြစ်လည်ပတ်မှုအတွက်အတားအဆီးများကြောင့်မကြာခဏဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Hypovolemia နှင့် hypoxia သည် PEA ၏အသုံးအများဆုံးအကြောင်းရင်းနှစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ကအလွယ်တကူပြောင်းပြန်ပြန်ရောက်နိုင်ပြီး၊ အကယ်၍ လူတစ် ဦး သည်အလိုအလျောက်လည်ပတ်မှု (ROSC) ပြန်လာပါကနှလုံးရောဂါဖြင့်ဖမ်းဆီးခြင်းစောင့်ရှောက်မှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း Palmitoylethanolamide ၏လူကြိုက်များမှုသည်အလွန်များပြားသောမြင့်တက်မှုကိုမျက်မြင်တွေ့ရှိရပြီးအဓိကအားဖြင့်လူအများအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုသိရှိလာကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်လူများသည် Palmitoylethanolamide ကိုအဓိကအားဖြင့်၎င်း၏ analgesic အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်အသုံးပြုသော်လည်း၎င်းသည် Lou Gehrig ၏ရောဂါ၊ ဆီးချိုအာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါ၊ မျိုးရိုးဗီဇစသည်တို့၊ fibromyalgia၊ carpal tunnel syndrome, glaucoma၊ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ၊ သည်အခြားရောဂါများအမျိုးမျိုး။ ယနေ့ခေတ်တွင် Palmitoylethanolamide (PEA) ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုလူများအားကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်အသုံးပြုသည်။ သို့သော်ဤဒေသတွင်သုတေသနပိုမိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
① အစောပိုင်းသုတေသနက Lou Gehrig ၏ရောဂါကုသမှုအတွက်ရလဒ်ကောင်းများကိုပြသသည်
Lou Gehrig ၏ရောဂါသို့မဟုတ် Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) သည်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီးမော်တာ - အာရုံခံဆဲလ်ယိုယွင်းခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်တိုးတက်သောသွက်ချာပါဒဖြစ်စေသည်။ အစောပိုင်းသုတေသနများအရ paliluoylethanolamide သည် riluzole နှင့်အတူသောက်သောအခါ၎င်းအခြေအနေကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။ PEA သည် endocannabinoid ဖြစ်ပြီး ALS လူနာများတွင်အဆုတ်လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေသည်။
② ၎င်းသည် Carpal Tunnel Syndrome နှင့်ကူညီသည်
Carpal Tunnel Syndrome ရောဂါသည်လက်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ဤအခြေအနေမှခံစားနေရသောလူများသည်လက်၌ထုံခြင်းနှင့်ထုံခြင်းတို့ကိုခံစားကြရသည်။ အခြေအနေသည်လက်ချောင်းလေးများ မှလွဲ၍ လက်ချောင်းအားလုံးအပါအ ၀ င်တစ်ခုလုံးကိုသက်ရောက်စေသည်။ 2017 လေ့လာမှုတစ်ခုအရ PEA သည် Carpal Tunnel Syndrome အပါအ ၀ င် compressive syndrome များကိုကုသရာတွင်ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် PEA ဖြည့်စွက်ဆေးများကို Carpal Tunnel Syndrome ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောနာကျင်မှုနှင့်အဆင်မပြေမှုများကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက်ယူနိုင်သည်။
③ ၎င်းသည်ဆီးချိုဆိုင်ရာ Neuropathy နှင့် Fibromyalgia တို့ကိုလည်းထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်သည်
ဆီးချိုရောဂါကြောင့်ဖြစ်သော neuropathy သည်ဆီးချိုရောဂါကြောင့်ဖြစ်သောအာရုံကြောပျက်စီးမှုဖြစ်သည်။ ဆီးချိုရောဂါနှင့်ဆိုင်သောအာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများတွင်ခြေထောက်များနှင့်ခြေထောက်များတွင်နာကျင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် Fibromyalgia သည်ကြွက်သားကင်ဆာစနစ်ကိုသက်ရောက်စေသောအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်မှတ်ဥာဏ်ဆိုင်ရာပြissuesနာများအပြင် fibromyalgia ၏အသုံးအများဆုံးလက္ခဏာမှာကြွက်သားကြွက်သားစနစ်တစ်ခုလုံးတွင်နာကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆီးချိုအာရုံကြောနှင့် fibromyalgia နှစ်မျိုးလုံးသည်အလွန်အမင်းမဟုတ်သည့်နာကျင်မှုအခြေအနေများဖြစ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဤအခြေအနေနှစ်ခုလုံးနှင့်ဆက်စပ်သောနာကျင်မှု palmitoylethanolamide ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
Multiple Sclerosis သည်ရောဂါပြီးစနစ်သည်အာရုံကြောများကိုဖုံးလွှမ်းနေသော myelin ကိုစတင်တိုက်ခိုက်သည့်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်၏အခြားအကြားဆက်သွယ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်သို့မဟုတ်လုံးဝမဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒီရောဂါလုံးဝကိုပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ပဏာမလေ့လာမှုအရ PEA သည် interferon-beta1a နှင့်ပေါင်းစပ်သောအခါနဗ်ကြောဖွဲ့ရောဂါနှင့်ဆက်နွယ်သောရောဂါလက္ခဏာများကိုသက်သာစေနိုင်သည်ကိုပြသည်။
⑤ ၎င်းသည် Glaucoma နှင့် Temporomandibular Disorders နှင့်ထိရောက်စွာရှိသည်
Glaucoma သည်အာရုံကြောကိုထိခိုက်နိုင်ပြီးအသက် ၆၀ နှင့်အထက်ရှိသူများအကြားမျက်စိကွယ်မှု၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ TMJ ရောဂါများသည်အခြားတစ်ဖက်တွင်မေးရိုးကိုနာကျင်စေသည်။ သုတေသနပြုချက်အရ palmitoylethanolamide သို့မဟုတ် PEA သည်ထိုအခြေအနေနှစ်ခုလုံးကြောင့်ဖြစ်သည့်နာကျင်မှုကိုကုသရန်သုံးနိုင်သည်။
PEA သည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအသုံးပြုမှုများအပြင်အာရုံကြောနာကျင်မှုအပြင်ခွဲစိတ်မှုပြီးနောက် analgesic ကိုလည်းအကြံပြုသည်။ အချို့သောအခြေအနေများတွင်၎င်းသည်ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ နှင်းခူခြင်း၊ endometriosis၊ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ၊ PEA သည်ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ထိရောက်မှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သို့သော်ဤဒေသများတွင်သုတေသနပိုမိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
နှစ်များတစ်လျှောက်ကွဲပြားခြားနားသောလေ့လာမှုများကကွဲပြားခြားနားသောဆေးညွှန်းကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပြီးမည်သည့်ဆေးကိုမျှပြီးပြည့်စုံသည်ဟုမယူဆနိုင်ပါ။ သို့သော်လူများအား၎င်းတို့၏ Palmitoylethanolamide (PEA) သောက်သုံးသောပမာဏကိုတစ်နေ့လျှင် ၃၀၀ မှ ၁,၂၀၀ မီလီဂရမ်အောက်လျော့နည်းစေရန်လူများကိုအကြံပေးသည်။ Palmitoylethanolamide ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုတစ်နေ့လျှင် ၃၅၀-၄၀၀ မီလီဂရမ်သောက်သုံးရန်နှင့်သောက်သုံးသောကြာချိန်သည်စုစုပေါင်း ၂ လထက်မပိုရန်အကြံပြုပါသည်။
Co- တည်ထောင်သူကုမ္ပဏီ၏အဓိကအုပ်ချုပ်ရေးခေါင်းဆောင်မှု; အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒဘာသာရပ်ဖြင့် Fudan တက္ကသိုလ်မှ PhD ရရှိခဲ့သည်။ အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဒီဇိုင်းပေါင်းစပ်ခြင်းတွင်ကိုးနှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်။ သုတေသနမူကြမ်း ၁၀ ခုနီးပါးသည်တရုတ်မူပိုင်ခွင့် ၅ ခုနှင့်အတူ၊
(1) Gabriella Contarini၊ Davide Franceschini၊ Laura Facci၊ Massimo Barbierato, Pietro Giusti & Morena Zusso (2019) 'Co-ultra micronized palmitoylethanolamide / luteolin ပေါင်းစပ်မှုသည်စမ်းသပ်နိုင်သည့် autoimmune encephalomyelitis ၏မောက်မော်ဒယ်တွင်လက်တွေ့ရမှတ်နှင့်ရောဂါနှင့်သက်ဆိုင်သောမော်လီကျူးအမှတ်အသားများကိုလျော့ပါးစေသည်' Neuroinflammation ၏ဂျာနယ်,
(2) မာရီယာကက်ထရီနာပက်စ်၊ ဗင်ဆင်ဇိုပိုတာ၊ Pasquale Sansone၊ Giacomo Piccinno၊ Manlio Barbarisi၊ Caterina Aurilio & Marco Fiore (2019) 'palmitoylethanolamide ကိုနာကျင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်လက်တွေ့အသုံးချမှု - ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက် protocol'၊ စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအသံအတိုးအကျယ်,
(3) Eleonora Palma၊ Jorge Mauricio Reyes-Ruiz၊ Diego Lopergolo, Cristina Roseti၊ Cristina Bertollini၊ Gabriele Ruffolo Pierangelo Cifelli၊ Emanuela Onesti၊ Cristina Limatola၊ Ricardo Miledi၊ 'လူ့ကြွက်သားများမှ Acetylcholine receptors ကို ALS ကုထုံးအတွက်ဆေးဝါးကုသရန်ရည်မှန်းချက်အဖြစ်'၊ Proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်။
(4) Di Cesare Mannelli, G. D'Agostino, အေ Pacini, R. Russo, အမ် Zanardelli, C. Ghelardini, အေ Calignano (2013) 'Palmitoylethanolamide သည် Perurric Neuropathy ရှိရောဂါကိုပြုပြင်သည့်အကျိုးဆောင် - နာကျင်မှုသက်သာခြင်းနှင့် Neuroprotection သည် PPAR-Alpha-Mediated ယန္တရားကိုမျှဝေသည်', ဖျန်ဖြေ Inflamm ။
(5) ပါမစ်တိုလစ်တန်အမ်ဒီ (PEA) (544-31-0)
(6) EGT စူးစမ်းဖို့ခရီး
(7) OLEOYLETHANOLAMIDE (OEA) - သင့်ဘဝရဲ့မှော်အတတ်
(8) Anandamide VS CBD - ခင်ဗျားရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဘယ်ဟာကပိုကောင်းတာလဲ။ သူတို့အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
(9) Nicotinamide Riboside Chloride အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
(10) မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ဖြည့်စွက်ချက်များ - အကျိုးကျေးဇူးများ၊ သောက်သုံးသောနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
(11) Resveratrol ဖြည့်စွက်ခြင်း၏ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ
(12) Phosphatidylserine (PS) သောက်သုံးခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ။
(13) Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) သောက်သုံးခြင်း၏အကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများ
(14) Alpha GPC ၏အကောင်းဆုံး Nootropic ဖြည့်စွက်
(15) Nicotinamide Mononucleotide ၏အကောင်းဆုံးအိုမင်းခြင်းအားဖြည့်စွက်ခြင်း (NMN)
ဒေါက်တာ Zeng Zhaosen
Co- တည်ထောင်သူကုမ္ပဏီ၏အဓိကအုပ်ချုပ်ရေးခေါင်းဆောင်မှု; PhD သည်အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒဘာသာရပ်ဖြင့်ရရှိခဲ့သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓာတုဗေဒ၏အော်ဂဲနစ်ပေါင်းစပ်နယ်ပယ်များတွင်ကိုးနှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသည်။ ပေါင်းစပ်ဓာတုဗေဒ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓာတုဗေဒနှင့်ထုံးစံပေါင်းစပ်နှင့်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ကြွယ်ဝသောအတွေ့အကြုံကို။
ယခု ကျွန်ုပ်ထံ လာပါ။
PEA pomożeမိုင် bardzo bolą mnie stawy i mięśnie, mam tez słabąodporność czy przyjmowanie ။ စိတ်ဓာတ်ရေးရာလှုပ်ရှားမှု။
နာတာရှည် Lymes ရောဂါရှိသည့်ကျွန်ုပ်၏ခွေးအတွက်လုံခြုံမှုရှိပါသလား။
မင်းဒီမှာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဆိုဒ်တစ်ခုရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကဒီနေရာမှာပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘယ်ဖိုရမ်ကိုမဆိုမင်းသိချင်ခဲ့တယ်။ တူညီတဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုမျှဝေတဲ့အခြားအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေဆီကအကြံဥာဏ်တွေရနိုင်မယ့်အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တာကိုငါတကယ်ကြိုက်ချင်ပါတယ်။ မင်းမှာအကြံဥာဏ်တွေရှိရင်ငါ့ကိုအသိပေးပါ။ သင့်ကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ!
ငါနွေရာသီကတည်းက PEA (နှင့် CoQ10) ကိုယူပြီးခဲ့ကြသည်။ အစပိုင်းမှာတော့အူလမ်းကြောင်းပြissuesနာကြောင့်ငါသည်းမခံနိုင်ခဲ့ဘူး။ အခုတော့ကျွန်တော့် ဦး နှောက်မြူမှုန်များနှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းများပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်သွားပြီ၊ နေ့တိုင်းသူတို့ကိုငါစဉ်းစားနေသည်။
ငါတကယ် PEA ယူပါ။ ဒါဟာသွယ်ဝိုက် cannabinoid receptors အပေါ်ပြုမူ။ CBD ကဲ့သို့သောဆေးခြောက်နှင့်အတူယူသည့်အခါ၎င်းသည်ထပ်တိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၂၀၀ မီလီဂရမ်နှင့်တစ်နေ့လျှင်သောက်လေ့ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ဘီဒီဂျမ် (1,200mg) တစ်နေ့လျှင် (၂၀၀ မီလီဂရမ် / တစ်နေ့) သောက်သောကြောင့်သာသောက်လေ့ရှိသည်။
သဘာဝအားဖြင့် PEA သည်ကိုယ်ခန္ဓာတွင်ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပြီးစွဲလမ်းမှုမရှိသောကြောင့်သင်သည်းခံနိုင်မှုကိုမရရှိနိုင်ပါ။ ၎င်းသည် ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကတည်းကလေ့လာမှုများတွင်နာကျင်မှုနှင့်ရောင်ခြင်းအတွက်ထိရောက်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုရေးတဲ့အားထုတ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါနောက်မှနောက်တဖန်သင်တို့အနေဖြင့်တူညီသောအဆင့်မြင့်အကြောင်းအရာကြည့်ရှုရန်မျှော်လင့်နေပါတယ်။ တကယ်တော့၊ မင်းရဲ့တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကငါ့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင် site ကိုရယူဖို့ငါ့ကိုအားပေးခဲ့တယ်။ )
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် COVID-19 ၏အန္တရာယ်အမြင့်ဆုံးတစ်ခုမှာ cytokine မုန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခုခံအားစနစ်သည်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုတိုက်ခိုက်ရန်ပantibိပစ္စည်းအလုံအလောက်မဖန်တီးမီရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့်ပျက်စီးမှုများစွာဖြစ်စေသော cytokine မုန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခုခံအားစနစ်အချိန်ကိုဒီရောဂါတိုက်ဖျက်ဖို့ခွင့်ပြုနည်းလမ်းကောင်းတစ်ခု။
ငါ့အဘို့ကရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အတူကူညီပေးသည်။ ဒါ့အပြင်အိပ်ရေးဝဝအိပ်စက်စေတဲ့အထောက်အကူ၊ ဆေးတစ်ဝက်မှတော်တော်လေးငိုက်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏ကာကွယ်ဆေးပညာရှင်က Palmitoylethanolamide ကိုအကြံပြုခဲ့သည်။ ငါ Mirica PEA ကို ၃ လကြာခဲ့ပါတယ်။ သေချာဖို့ခဲယဉ်းသည်။ အကြှနျုပျ၏ရောဂါလက္ခဏာတွေအများကြီးတိုးတက်လာပေမယ့်အချိန်အများကြီးလည်းလွန်ပြီ။ ငါယူတာကိုရပ်လိုက်ရုံနဲ့ကျွန်မရဲ့ခံစားချက်သိသိသာသာခြားနားချက်ကိုသတိမပြုမိဘူး။ ငါသောက်နေစဉ်ငါ့မှာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်အနည်းဆုံးတော့နာကျင်ဟန်မရှိဘူး။
အစာအများစုသည်အစာမကြေဘဲဝမ်းဗိုက်တွင်ကောင်းမွန်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့တွင်အလေးအနက်ကျောထောက်နောက်ခံမရှိလျှင်အစာအိမ်နှင့်ဆိုင်သောပြissuesနာများမဖြစ်ပေါ်စေပါ။
Welp ငါဒီနေ့အချို့အန္တရာယ်များနှင့်အမိန့်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှုကိုငြီးငွေ့စေမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
Palmitoylethanolamide သည် endogenous fatty acid amide ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲ၌ရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။
အချို့လူများက၎င်းကိုလျော့နည်းစေပြီးအသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှသင်၏အဆင့်များကျဆင်းသွားသည်။ ဒါ့အပြင်ဖြည့်စွက်သူတို့အားအဆင့်ဆင့်ကိုပြန်တက်ဆောင်ကြဉ်းကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ၎င်းကိုအစားအစာများတွင်လည်းတွေ့ရသည်။ အရမ်းလုံခြုံတယ် လူအများစုကဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာနားမလည်ကြဘူး။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်သဘာဝစွမ်းအားနိမ့်ကျသောသူတစ် ဦး ဖြစ်မည်ဆိုလျှင်သင်သည်မည်သည့်အရာကိုမျှခံစားရမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်၊ သဘာဝနိမ့်အဆင့်ရှိသူများသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအလွန်ပြင်းထန်စွာခံစားရသည်။ ဒါကြောင့်သူက Polarizing အမြင်များကိုမြင်ရတာပါ။
နာကျင်မှုအတွက်ငါမကြာသေးမီကကျွန်ုပ်နေ့စဉ် ၁၂၀၀ မီလီဂရမ်သောက်သော PEA ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကူညီနေပုံရသည်
တစ်ခြားသောနေ့၌အမေသည်သူမ၏အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းရောဂါအထူးကုဆရာ ၀ န်သို့ ၀ င်ရောက်ပြီး၊ သူမ၏ biomarkers များကိုရောင်ရမ်းခြင်းအတွက်ပြောခဲ့သည်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။ ငါအတိအကျမမှတ်မိတော့ဘူး၊ ငါ့အမေကသူတို့ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိသုံးနေတယ်ဆိုတာသေချာတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူကဒီ biomarker ကိုအပြည့်အဝရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်ဖို့ ၀ ကနေ ၃၀ ကြားမှာရှိတယ်၊ ဤအချိန်သူမအသက် ၁၅ နှစ်ဖြစ်သည်။
Palmitoylethanolamide သည်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်နာကျင်မှုများအတွက်ပိုကောင်းသည်။ Oleamide သည်အိပ်စက်ခြင်းအတွက်ပိုကောင်းသည်။ နှစ် ဦး စလုံးကိုယ်ခံစွမ်းအားအဘို့အကောင်းဖြစ်ကြသည်။ PEA ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားကာကွယ်ရေးတွင်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ငါသည်လည်းမကြာခဏခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းခံရလေ့ရှိသည်၊ များသောအားဖြင့်တစ်လလျှင် ၁-၂ ကြိမ်နှင့် Palmitoylethanolamide သည်ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်နေစဉ်ကျွန်ုပ်အတွက်အံ့ဖွယ်အမှုများဖြစ်သည်။
ငါအမှုန့်အတွက် PEA ယူပြီးခဲ့ကြရတယ် ငါယူလိုက်တဲ့တခြားအရာတွေအားလုံးထက်နာကျင်မှုအနည်းငယ်ပိုကောင်းအောင်လုပ်တာတွေ့ပြီ။
ကောင်းပြီတစ်ခုမှာ (P) Phenyl (E) ethyl (A) amine ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုမှာ (P) Palmitoyl (E) ethanol (A) amide ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်လူများသည် Phenylethylamine ကို Phenylalanine နှင့်အမြဲတမ်းရှုပ်နေသကဲ့သို့ Cytisine နှင့် Cysteine ​​တို့ပါ ၀ င်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဓာတုဒြပ်ပေါင်းများကိုအလွန်နီးကပ်စွာစာလုံးပေါင်းပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်တူညီသောအတိုကောက်များရှိသည်။ ငါကြိုက်တယ်လို့မပြောနိုင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် Palmitoyalethanolamide ဟာပါးစပ်ထဲကပဲ။ ဒါကြောင့်အတိုကောက်ကအများကြီးပိုလွယ်သည်။
ငါဆီးအိမ်နာကျင်မှု (ကမသိသောအကြောင်းမရှိ) အတွက်ယူ။ ကြီးမြတ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ခွေး၏ဆေးဝါးကုသမှု (ဓာတ်မတည့်ခြင်းအတွက်) တွင်အဓိကပါဝင်သောကြောင့်၎င်းသည်ကူညီရန်ပုံရသည်။
ငါတို့အတွက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပါ။ ငါ့အိပ်မပျော်ဘူး။ အိုး ဒါပေမယ့်မမျှော်လင့်ထားတဲ့ဆုကြေးငွေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်မရဲ့ဒူးခေါင်းကိုလည်းပျောက်သွားတယ်။
နာတာရှည်နာကျင်မှုဝေဒနာကိုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးခံစားခဲ့ရပြီးပြီ။ PEA က၎င်းကိုအသင့်အတင့်ဖြစ်စေပြီးကျွန်ုပ်၏နာကျင်မှုသည်ပုံမှန်မှိုင်း။ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အခါ PEA သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိပုံရသည်။
Palmitoylethanolamide သည် endogenous fatty acid amide ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲ၌ရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ အချို့လူများက၎င်းကိုလျော့နည်းစေပြီးအသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှသင်၏အဆင့်များကျဆင်းသွားသည်။ ဒီတော့ဖြည့်စွက်ပြန်အဆင့်ဆင့်သူတို့အားအဆင့်ဆင့်ဆောင်ကြဉ်းကူညီနိုင်သည်။ ၎င်းကိုအစားအစာများတွင်လည်းတွေ့ရသည်။ အရမ်းလုံခြုံတယ် လူအများစုကဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာနားမလည်ကြဘူး။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်သဘာဝစွမ်းအားနိမ့်ကျသောသူတစ် ဦး ဖြစ်မည်ဆိုလျှင်သင်သည်မည်သည့်အရာကိုမျှခံစားရမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်၊ သဘာဝနိမ့်အဆင့်ရှိသူများသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအလွန်ပြင်းထန်စွာခံစားရသည်။ ဒါကြောင့်သူက Polarizing အမြင်များကိုမြင်ရတာပါ။
အခု COX-2 နဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားရဲ့မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူက COX-2 ရဲ့ modulator ကိုမဟုတ်ဘဲယှဉ်ပြိုင်မှုတားဆီးသူမဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းသည် endocannabinoid receptors GPR55 နှင့် GPR119 နှင့်ဆက်စပ်သည်။ ၎င်းသည် cyclooxygenase-2 (COX-2) နှင့်သွေးဆောင်နိုင်သည့်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase (iNOS) ၏ဖော်ပြချက်ကိုထိုအရာကထိန်းညှိပေးသည်။ ၎င်းသည် PPK-α agonist ဖြစ်ပြီး IkB-alpha degradation နှင့် p65 NF-kappaB နျူကလီးယားပြောင်းလဲခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည်။ ၎င်း၏ PPAR-αဆှဖှေဲ့က neuroinflammation ကိုလျော့နည်းစေတယ်။ ၎င်းသည်တိုက်ရိုက်ချည်နှောင်ခြင်း၏ထိပ်တွင်၎င်းသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်၏အဓိက endocannabinoid ဖြစ်သော CB1 နှင့် CB2 receptors များနှင့်အတူ anandamide ကိုပိုမိုစည်းနှောင်စေနိုင်သည်။ ဒါဟာတကယ်ကိုအေးမြတဲ့ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုပါ။
နာတာရှည်နာကျင်မှုဝေဒနာရှင်များအတွက်အလွန်အလားအလာရှိသောဤနှိုင်းယှဉ်။ မရသေးသောဤအရာဝတ္ထုနှင့် ပတ်သက်၍ ရေးသားလိုသည်။ Palmitoylethanolamide (PEA) သည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အခြားတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အပင်များ၌အလွယ်တကူတွေ့ရှိနိုင်သော fatty acid amide ဖြစ်သည်။ အီတလီလူမျိုးဆရာဝန် Rita Levi-Montalcini မှ PEA သည်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် analgesic ဂုဏ်သတ္တိများရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်
နှစ်ကြိမ်မျက်စိကန်းသော၊ ရလဒ်များအရအိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီဝေဒနာရှင် ၆၃၆ ဦး ကိုစမ်းသပ်ကုသမှုအရ ၃ ပတ်အကြာတွင် ၁.၅ ဖြစ်သည်။
PEA သည်နာကျင်မှုအမျိုးအစားများစွာအတွက်သုတေသနပြုနေခြင်းဖြစ်သည်။ ငါပြောနိုင်သလောက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုမတွေ့ရသေးဘူး။
နာတာရှည်နာကျင်မှုကိုကုသရာတွင် Palmitoylethanolamide အသုံးပြုမှုကိုဆွေးနွေးသည့်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်အသေးစား။ IBS လူနာများနှင့် IBS တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များတွင်၎င်းကိုလေ့လာမှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။ အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းထဲမှာ endocannabinoid စနစ်၏အခန်းကဏ္ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းက PEA နှင့်ဆက်စပ်တဲ့အဲဒီ receptor တွေရဲ့အခန်းကဏ္painကိုနာကျင်မှုကုသမှုအတွက်စူးစမ်းဖို့စိတ်ဝင်စားစရာဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်။
palmitoylethanolamide (PEA) သည်မည်မျှလုံခြုံမှုရှိသနည်း။
ငါမကြာသေးမီက PEA အမှုန့်အချို့ကိုမှာလိုက်သည်။ ဒီနေ့ပဲစာရောက်လာတယ်။ ငါက COX2 inhibitor ဖြစ်တာကြောင့် PEA နဲ့ထိတွေ့မှုရှိ၊ မရှိရှိမရှိထပ်ဆင့်လေ့လာမှုအနည်းငယ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်သည် PEA ယူရန်လုံခြုံပါသလား။
ငါဒါကိုအခြားတစ်ယောက်ယောက်ကငါလုပ်ခဲ့သလိုပဲအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ဟာနှစ်ပေါင်း (၂၀) ​​ကျော်ကျော်ထိအာရုံကြောနာကျင်မှုဝေဒနာခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါစတန်းဖို့ဒ်မှဖြစ်ခဲ့တာ၊ Fentanyl မှမော်ဖင်းအကိုက်အထိ oxy နှင့် benzos၊ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုဆန့်ကျင်စသည်တို့အထိကျွန်ုပ်သည်ခွဲစိတ်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနှစ်များတစ်လျှောက်ကြိုးစားခဲ့ဖူးသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ဤရိုးရှင်းသောအရာများကိုကြိုးစားရန်မည်သူမျှတစ် ဦး တစ်ယောက်မှမပြောခဲ့ပါ။ တချို့အရာတွေကကူညီပေမယ့်ဘာမှမအလုပ်လုပ်ခဲ့ ကျွန်မအိပ်ရာတိုင်းထိုင်တိုင်းနေ့စဉ်စိတ်နာပါတယ်။ တစ်ခါတလေလမ်းလျှောက်ဖို့ခက်တယ်။ ငါ၏အ pudendal အာရုံကြောကိုထိခိုက်ဟောင်းခွဲစိတ်ကုသမှုကနေငါ့အနိမ့်ကျောရိုးအတွက်၎င်း၏အာရုံကြောပြissueနာ။ အိပ်စက်ခြင်းဟာတစ်မိနစ်လျှင်မိနစ် ၃၀ ကြာပြီးတစ်စုံတစ်ခုကိုလုံးဝမရရှိဘဲရက်များစွာကြာတတ်သည်။
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သိသောတစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်သည် PEA ဟုခေါ်သောအရာတစ်ခုခုကိုစမ်းသုံးရန်အကြံပြုခဲ့သည်။ ငါကအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ခြင်းကိုသုညရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်၎င်းသည်လုံခြုံစိတ်ချရပုံရသည်။ ငါအဲဒါကိုအမေဇုံမှာရရှိနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်း ၆၀ လေ့လာခဲ့ပြီးပြီ၊ ၎င်းကို Palmitoylethanolamide (PEA, PEA ကိုအတိုကောက်ခေါ်ထားသည့် Phenethylamine နှင့်မရောထွေးစေရန်) ဟုခေါ်သည် Palmitoylethanolamide ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အစားအစာများတွင်သဘာဝကျကျတွေ့ရှိရသည်။ ၎င်းသည် "ဖက်တီးအက်စစ် amide" ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် endocannabinoid system ကိုများစွာအကျိုးသက်ရောက်သည် (၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ endogenous cannabinoid anandamide ကိုတိုးစေသည်) ။
ငါတစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ် 120mg သောက်ပါ။ ပထမတော့ငါသတိမထားမိဘူး တကယ်တော့ပထမရက်သတ္တပတ်မှာငါအချိန်အကြာကြီးအတွင်းအဆိုးရွားဆုံးသောအလင်းရောင်ထဲကတစ်ခုပါ။ ဒုတိယအပတ်မှာတစ်ညအိပ်လိုက်တယ်၊ ညလုံးငါအိပ်ခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော်နာကျင်နေပါတယ် ငါက fluke ဖြစ်ခဲ့သည်နေသေးတယ်။ ငါမူကား၊ ဒါဟာရက်အနည်းငယ်ဘို့မတိုင်မီပိတ်ထားခဲ့သည် ကောင်းပြီ၎င်း၏တစ်လကျော်နေဆဲနာကျင်မှုမရှိ။ PEA သည်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောအရာနှင့်အာရုံကြောနာကျင်မှုအတွက်အလုပ်လုပ်သည်ဟုလူသိများသည်။ အချို့သောအသေးစားလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများအရ FDA များမှကတိပေးခဲ့သည်။
PEA သည်အရာအမျိုးမျိုးကိုကုသပေးလိမ့်မည်ဟုလူအများကပြောဆိုကြသည်။ အရာအားလုံးအကြောင်းကို IDK ။ ငါသိသမျှအားလုံးကသူ့ရဲ့နာကျင်မှုကိုငါလုပ်ခဲ့သမျှအခြားအရာများထက်ပိုပြီးကူညီပေးနေတာပါ။ ငါသည်ငါ့နာကျင်မှု meds 100% ကိုချွတ်ပါပြီ။ ငါသည်ငါ့ meds အားလုံးချွတ်တယ်နှင့်နေဆဲနာကျင်မှု !!! ကျနော့်ဆရာဝန်များစိတ်ထဲလွင့်စင်သွားပြီးသူမသည်အခြားလူနာများနှင့်စမ်းသပ်ကြည့်တော့မည်။
သင်စမ်းကြည့်ပါကရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ပေးပါ။ တစ် ဦး ကိုရိုက်ကူးကျိုးနပ်သည်။ ၎င်းသည်အခြားဆေးများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသို့မဟုတ်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်သောကန့်သတ်ချက်ရှိသည်ဟုမသိရသော်လည်းနှေးကွေးစွာစတင်ခဲ့သည်။ 300mg အထက်ဆေးများကကျွန်ုပ်ကိုအနည်းငယ်ခေါင်းကိုက်စေသည်။
ဒါဟာငါ့အာရုံကြောနာကျင်မှုအပေါ်သာအလုပ်လုပ်တယ်။ ပုံမှန်နာကျင်ကိုက်ခဲမှုခံစားနေရတုန်းပဲ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ငါပဲပိုကောင်းခံစားရသည်။ သငျသညျအရံအာရုံကြောနာကျင်မှုခံစားနေရပါကတစ် ဦး ကိုရိုက်ချက်ပေးခြင်း၎င်း၏တန်ဖိုးရှိ။
မဂ္ဂနီစီယမ်သည်အရူးအိပ်မက်များဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့်ကျော်ကြားသည်။ 5-HTP သည် iirc နှင့်အိပ်မက်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည်။
ငါအိပ်ရာမဝင်မီ 3h ထက်နည်းသောမဂ္ဂနီစီယမ်ကိုမယူနိုင်ပါ။ အိပ်မက်ဆိုးမမက်ပါ။ ကျွန်ုပ်အိပ်မပျော်ပါ။
ငါမကြာသေးမီက Palmitoylethanolamide ကိုမြင်လျှင်ငါကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ငါစသုံးပြီးကတည်းကတစ်ပတ်လောက်ပဲကြာပြီ၊ ဒါကငါ့ကိုတော်တော်လေးကူညီပေးခဲ့တယ်။
နာတာရှည်နာကျင်မှုကုသမှုတွင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အထူးအစားအစာ Palmitoylethanolamide - အချက်အလက်များစုစည်းထားသည့်အချက်အလက်များ။ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26815246
Oleamide vs. Palmitoylethanolamide
သူတို့နှစ် ဦး စလုံး moa အတွက်အလွန်ဆင်တူပုံရသည်, အခြားတယောက်အပေါ်မှာတယောက်ကြိုးစားရန်ထိုက်တန်လျှင်မသေချာ။ အဓိကအားဖြင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားဟန်ချက်ညီစေရန်၊ အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးမြှင့်တင်ရေးအတွက်အပိုဆုကြေးရှာခြင်း။
ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုဟာအဖြူရောင်အမှုန့်ပဲ။ သူသည်ရေပျော် ၀ င်မှုမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်အရသာမရှိဘဲအလွန်နှေးကွေးစွာပျော်ဝင်သွားခဲ့သည်။
ငါစတင်ယူသည့် အချိန်မှစ၍ ၁၀ ရက်ခန့်တွင်အတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်။
အခုလအနည်းငယ်ရှိပါပြီ။ ငါအများကြီးပိုကောင်းတယ်ခံစားရတယ်၊ ငါဘယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုမှသတိမပြုမိဘူး။
ငါ ၆၀၀ မီလီဂရမ်ကိုတစ်နေ့နှစ်ကြိမ်သောက်နေပြီးတစ်ပါတ်ထက်ပိုကြာပြီးရလဒ်ကတော့ထူးခြားသည်။
ငါမဂ္ဂနီစီယမ်နှင့်အတူပြproblemsနာများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဒါပေမယ့်အိပ်ရာမဝင်မီငါ့ကိုအိပ်မက်ဆိုးမပေးမီ 5htp ။ ငါ 5htp နေ့လည်ခင်းကိုရွှေ့ခဲ့ရတယ်။
Palmitoylethanolamide ငါ့ကို fibromyalgia နာကျင်မှုကနေကယ်ဆယ်ရေးပေးထားသည်။ ထိုအခါငါအိပ်ပျော်စဉ်မှာသံဘောင်နှင့်ရိုက်နှက်ခံရတူသောငါခံစားမနိုး။